ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MyJobs
Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား
အလုပ် 212 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
A Restaurant Manager makes sure the restaurant runs smoothly. They hire and train staff following company policies. In addition, Restaurant Managers speak with customers about any concerns or problems, while also creating work schedules.
QC Technician (Rice Mill)
Ensure the smooth implementation of the various laboratory tests in this shift, ensure the accuracy and timeliness of the inspection data, and cooperate with the monitor to do the work of the team.
We are seeking for Interior Designer Position for one of the leading construction material companies in Myanmar. Don't miss this great opportunity and apply now !
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ2ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေး အလုပ်အကိုင်များ3စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 29 စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ 1 စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ 11 ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 12 ဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ အလုပ်အကိုင်များ5ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ 12 ဖောက်သည် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ4ယာဉ်မောင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န််််ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ 1 ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 31 လူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များ3လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ6သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 19 ဟိုတယ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု အလုပ်အကိုင်များ 1 အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 19 အစားသောက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 1 အဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များ 1 အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 32 အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 16
ကြော်ငြာ ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 8 စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း6မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း2ဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း3ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း 19 ပညာရေးလုပ်ငန်း 18 စွမ်းအင်လုပ်ငန်း4ဖျော်ဖြေရေး၊ ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် အားကစား လုပ်ငန်း 1 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း 14 ဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း9နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း 24 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 36 သတ္တုတူးဖော်ရေး ၊စွမ်းအင် နှင့် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း4လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 44 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 20
Expats Preferred 24 Repats Preferred 18